Dhageyso Dagaal Markale Ka Dhcay Degmada Baardheere. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Dagaal Markale Ka Dhcay Degmada Baardheere.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey dagaal culus ku qaadeen saldhiga ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ay ka sameysteen garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ee gobalka Gedo.
Dagaalkan waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan,iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee degmada Baardheere iyo deegaanada hoostaga degmadaasi.
Dadka deegaanka waxey sheegeen iney jirto khasaara ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya kasoo gaartay dagaalka culus ee saqdii dhexe ee xalay ka dhacay garoonka diyaaradaha degmada Baardheere ee gobalka Gedo.
Dagaalkan waxa uu kusoo aadayaa xilli Labadii habeen ee lasoo dhaafay ciidamada Shabaabul Mujaahidiin dagaalla toos ah ay ku qaadeen difaacyada ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo kuwa maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka kala sameysteen degmooyinka Qoryooley iyo Afgooye oo ka wada tirsan gobalka Shabeelada hoose.